Hot ingxoxo nsuku zonke amantombazane entsha Timati - Anastasia Reshetova - bengayeki kuze kube yilolu suku, futhi eqinisweni baqala ukujola Kudala 2015. Ngubani yena, ukwedlula edumile, akwenzayo manje? Lezi kanye nezinye ezifana nayo imibuzo esinesithakazelo kuyo abaningi.
Biography Anastasia Reshetova
Le ntombazane wazalelwa emndenini uColonel Januwari 23, 1996. nabazali bakhe abahlukanisile, futhi mina nodadewethu walethela uyise Anastasia endaweni imithetho kunalokho esiqinile. Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, Heroine kwalesi sihloko wangena eMoscow State University ku wezifundo kwahulumeni ekuphathweni komasipala, kodwa ngokushesha ayeka. Ngezinye nesishiyagalombili wahlanganyela emncintiswaneni ubuhle futhi umklomelo.
Njengoba sekushiwo, okwamanje umngane Anastasia Russian rap umculi Timati. Ekhasini yakhe "Instagrame" kwenza izithombe izipho ezibizayo. Cishe wonke amagama Uyabhala ngiyabonga "bili ezinhle".
Anastasia Reshetova phambi plastic ngiseyintombazanyana ekhangayo. Lokhu kufakazelwa title yayo "Vice-Miss Russia 2014". Ngokwe intombazane, akakaze wacabanga ukuxhuma ukuphila kwakhe ukumodeliswa ibhizinisi. Noma kunjalo, uma uvele kwi Ukusakaza ukuphawule, bese konke sasenza.
Manje Anastasia Reshetova wale nhlangano yomnikazi umtholampilo wobuhle. Wabhala incwadi ngokuphila kwakhe, okuyinto esikhathini esizayo esiseduze uyovela iphrinta futhi nakanjani ube ethengwa kakhulu. Ukuphishekela konke lokhu kwenza ayiphethe angene ukukhangisa izivumelwano eziningi futhi bahlanganyele imibukiso.
Anastasia Reshetova ukuze amapulasitiki sehluke kancane. Yiqiniso, into yokuqala ukuthi abambe iso, kwashintsha ezindebeni zakhe. Imodeli uqobo akusho ulifihle. Ngo microblog yakhe watshengisa isithombe ukusebenza nge amazwibela: ". DESC Manje Izindebe kuyoba"
Anastasia futhi Reshetova ukuba amapulasitiki abe ukuma kancane ezahlukene ekhaleni. Emva inqubo, ukuthi yayincane futhi amaphiko abe kancane.
Abaningi abathi ukuthi kwadingeka isigenco esiwela kwesokudla ukushintsha ivolumu ezinqeni. Nokho, lokhu kuwubufakazi ebonisa. Abanye abezindaba waqala ukuqhathanise Kim Kardashian. Futhi abalandeli musa usukhathele ukuvikela Reshetova zithi wenze amafomu eliconsisa ezinjalo kuphela iBhayibheli lithi ngemizamo yabo okungukuthi kahle futhi eyenza ihholo, ngaphansi kokuqondisa umqeqeshi ngabanye. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, Anastasia Reshetova ngaphambi nangemva plastic ubukeka ekhanga kanjani.
Umlingisikazi Uma Thurman: Biography, Filmography nesithombe
Filmmaker Nagisa Oshima: Filmography ephelele, biography kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Umlingisikazi Daniel Dare: Biography, Filmography, empilweni yakho
Del'Orefays uCarmen (Carmen Dell'Orefice), imodeli kakhulu amadala emhlabeni: biography, empilweni yakho
Lapho ingane iqala ukukhuluma? Yini okufanele ngiyenze uma kungahlali ngaphakathi isikhathi imikhawulo ethile
Nefilosofi Medieval ngamafuphi: izinselele, izici, incazelo emfushane, izinyathelo